Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » TSIA lehibe amin'ny fizahantany Kenya nataon'ny UNWTO: Tezitra i Afrika!
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kenya Breaking News • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tezitra i Neny Afrika androany. Araka ny nantenain'ny eTurboNews, nolavin'ny Sekretera Jeneralin'ny UNWTO ny fangatahan'ny Minisitry ny Kenya mba hanaovana ny fivoriambe ho avy any Kenya.
Madrid amin'ny maha-toerana azy dia toa tombony mazava ho an'i Zurab Pololikashvili ny fanamafisana indray ho Sekretera Jeneraly mandritra ny 2 taona hafa.
Tokony hampiantrano ny fivoriamben'ny UNWTO ny 28 Novambra - 3 Desambra 2021 i Maraoka, saingy nofoanana noho ny fiarovana ny COVID. Mety ho nisavoritaka tamin'ny fandikan-teny io fangatahana io
Naharitra 3 andro ny UNWTO vao nampahafantatra ireo firenena mpikambana, ary tao anatin'ny ora vitsivitsy taorian'ny nahazoana ity naoty ity, dia nanolotra ny toeran'i Maraoka sy hampiantrano ny hetsika i Kenya. Kenya no safidy laharana faha-2 tamin'ny adihevitra tany am-boalohany 2 taona lasa izay.
Nolavin'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO tanteraka ny tolotra nataon'i Kenya.
Naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fanapahan-kevitry ny UNWTO ny Minisitry ny Fizahantany Afrikana maromaro ary nisy ny nilaza fa tokony ho tezitra i Afrika amin'ny hetsika hanakanana ity fangatahana fampiantranoana firenena afrikanina ity.
Diso fanantenana na mety tezitra mihitsy i Hon. Najib Balala, sekreteran'ny fizahantany any Kenya, dia nanamafy, "UNWTO Nolavin’ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili tanteraka ny fangatahanay hampiantrano ny fivoriambe.” Ny valin-tenin'ny UNWTO dia hoe tara loatra, tsy ampy ny fotoana.
Nilaza ny minisitra afrikanina iray hafa, ny UNWTO dia ao anatin'ny faritra malemy ary very fahatokisana tanteraka an'i Afrika. Fotoana tsara indrindra hangatahana amin'ny Fivoriambe ny latsa-bato miafina mba hijerena marina raha tokony hohamafisina ny fifidianana indray an'i Zurab amin'ny filankevitry ny mpanatanteraka.
Solontena iray hafa tsy any Afrika no nilaza tsy an-kiato hoe: Tsy misy olona maniry ny hofidiana indray. Tsy maintsy manao izay rehetra azo atao isika mba hanesorana azy. Mety ho tonga izao ny fotoana.
Tamin'ny Fivoriambe tao Chengdu, Shina, tamin'ny 2017, dia nohamafisin'ny fanambarana i Zurab, fa tsy tamin'ny latsa-bato miafina. Mitaky firenena iray ny mangataka fifidianana miafina.
Maro no mihevitra fa tsy hahazo ny 2/3 ny maro an'isa ilaina i Zurab raha misy latsa-bato miafina amin'ny fivoriambe manaraka.
Na izany aza, tombony lehibe ho azy ny fanaovana ny fivoriambe any Madrid. Antenaina fa tsy handeha any Madrid ny minisitra amin'ny fivoriamben'ny UNWTO ary hosoloina mpiasan'ny masoivoho.
Afrika no be indrindra amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO, saingy tsy dia maro amin'ireo firenena Afrikana no manana masoivoho any Madrid na manana loharanon-karena handefasana minisitry ny fizahantany amin'ity hetsika ity any Espaina.
Fantatr'i Zurab Pololikashvili ny lalany manodidina ny vondrom-piarahamonina diplaomatika ao Madrid. Izy no ambasadaoron'ny Repoblikan'i Georgia talohan'ny nitantanany ny UNWTO.